August 2018 | Save A tareenka
Maxaa ka fiican in ay qaataan xagaaga aad ka badan safarka Yurub, xaq u? Right. Ma aha in aad si bankiga u jabin si aad u aragto qaar ka mid ah caasimadaha Europe qurux badan; rumaysanina ama ma, laakiin mid ka mid ah dhinacyada muhiimka ah ee aad kharash-ool ah safarka Europe waxaa dooranaya…
Waayo, musaafiriin dhici inay xiiseynayaan in sports, uunana socod England kulan Premier League noqon kartaa waayo-aragnimo u gaar ah. Iyadoo dhowr kooxood oo ku kici iyo ka dhicin horyaalka xilli kasta, waxay la micno ah marna ay isku jeer oo isku xiga, waxaa had iyo jeer…
Qaadashada tareenka waa mid ka mid ah hababka ugu fiican in ay la kulmaan gobolada ugu muuqaal dabiici Yurub. buuraha cajiib raaxaysta, harooyinka, Wabiyaal Bbc iyo guulahaas cajiib ah injineernimada - Kuwani waa The Most Saffarada Tareen muuqaal dabiici ah in Europe. Maqaalkan waxaa loo qoray in lagu baro wax ku saabsan Safarka Tareenka…
Beri baa ah, marka miisaaniyadda ma door doorashada dalal (ama ugu yaraan, ma aha sida weyn u door!) wax ahaayeen fudud; maalmahan, haddii aan rabno in aan u safro, we have to be smart with the way we handle our…
The rafaadka iyo element waqti dhumin garoonka safafka jeeg-in iyo saxmadda gaadiidka oo dhan waa mid aad u fiican u yaqaan in ay safarrada ganacsiga. Marka laga haddii aad u baxaysid safar gaaban Business tareen ama mid dheer in qaadan doonta dhawr saacado ama maalmo, Tareen…
Boobka map a of Europe oo go'aan ka halkaas oo si ay u tagaan noqon kartaa qarow! Haa, gaar ahaan haddii aad heysato oo dhammu waa laba todobaad. On qaaradda si kala duwan oo hodan ku ah dhaqanka, labadii toddobaad ee u ekaan kartaa mid aad u gaaban! Sidaa darteed, waa laga yaabaa in ugu wanaagsan ee…
Maxaynu raacayso tareen? safarka tareenka waxaa lagu nasto, wax ku ool ah iyo dalabyo arrin bulsho oo hababka kale ee gaadiidka fudud ma u dhigma karaa. Si kastaba ha ahaatee, safraya naafada ah waxay noqon kartaa dhib in qaar ka mid ah. Tani macnaheedu ma aha ma waxaad ku raaxaysan kartaa madadaalo ah, in kastoo. Tani…
Ku safridda Amsterdam iyo Berlin tareenka waxay u yaboohay socotada khibrad aan la ilaawi karin iyo doorashada ugu saaxiibtinimo ee Eco. Inkasta oo safar lix saac waa xoogaa gaabis ah, raaxada ay bixiyaan tareenada iyo soo jiidashada ee safarka waa u fiican. With beautiful scenery along the…
Currency appWe recently wrote a blog on Riding with kids on a train and gave you some tips for keeping your little ones entertained. Akhriska buugaagta, ciyaaro Uno iyo dhegaysiga buugaag hubaal waa waajib qof kasta, but there are tons of apps to download…
Inkasta oo tareen qarsoodiga ah habeen Yurub waxa ay noqonayaan wax ka mid ah noocyada khatar ku (diyaaradaha miisaaniyadda aan dooneyno aad ugu!), tareen ku caashaqay ayaa weli ma quusan! Waayo, kuwii ku caashaqi jiray xamaasad tareenka, waxba garaaca bootimaalaysiga saarnaa tareenka habeen iyo riyaaqayaa quruxda masaafo dheer oo aan…